ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကို နိုင်ငံရေးလက်နက်လို အသုံးပြုလာတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေနဲ့ ခေတ်ပျက်သူဌေးများ - Zet Star
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကို နိုင်ငံရေးလက်နက်လို အသုံးပြုလာတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေနဲ့ ခေတ်ပျက်သူဌေးများ
ကာကွယ်ဆေးနဲ့နိုင်ငံရေး (ကာကွယ်ဆေးကို ကျန်းမာရေးအတွက်ဦးစားပေးမထုတ်ပဲ နိုင်ငံရေးအကျိုးစီးပွားအတွက်ဦးစားပေးထုတ်လေသောအခါ။)
COVAX ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံးက ပြည်သူတွေရဲ့ ၂၀ ရာနှုန်း #မရှိမဖြစ်သူတွေဦးစားပေးကာကွယ်ဆေးရရှိရေးအစီအစဉ်အဖွဲ့ကြီး အောင်မြင်စွာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးပါပြီ။
တရုတ်၊ အမေရိကန်၊ ရုရှား ထိုသုံးနိုင်ငံလက်မှတ်မထိုးပါ။ နောင်ပါဝင်လာနိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးကို အရင်ဆုံးရပါတယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပထမဆုပေးတဲ့ ရုရှားကလည်း လုံးဝလက်မှတ်မထိုး။ ကာကွယ်ဆေးကိုရှေ့ဆုံးက စလုပ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကလည်း WHO က ဦးဆောင်ဦးရွက်လုပ်လို့ဆိုပြီး လက်မှတ်မထိုး။ ကာကွယ်ဆေးကို ပြည်ပစျေးကွက်ကို မကြာခင်မှာ အားရပါးရထုတ်ရောင်းတော့မယ့်တရုတ်ကလည်း လက်မှတ်မထိုး။ ကာကွယ်ဆေးတော့အမြန်စျေးကွက်ပို့ဖို့လုပ်နေပြီး COVAX ကျတော့ လက်မှတ်မထိုးတဲ့ သူတို့ရဲ့စေတနာကိုမေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။
ကျနော့်ကို ကာကွယ်ဆေးဘယ်တော့ရမလဲ? ရုရှားက ထုတ်ရောင်းတော့မှာသေချာလား? တရုတ်က မကြာခင်ရောင်းတော့မှာလား? ရောင်းနေပြီမလား? စတဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးတဲ့သူတွေကို ပြန်ဖြေရရင် ကာကွယ်ဆေးကိစ္စဟာ ကျန်းမာရေးသီးသန့်မဟုတ်ပဲ နိုင်ငံရေးစီးပွားရေး လက်ဦးမှုယူတာတွေပါလာတဲ့အတွက် ကာကွယ်ဆေးကိစ္စမှာ ကျနော်ဘာမှအကြံမပေးလိုပါ။
ကိုယ့် risk ကိုယ်ယူရဲရင် ကိုယ်တာဝန်ယူထိုးရတော့မယ့်ပုံပါ။ ကျနော့်ကို ငယ်စဉ်ကအဖိုးကြီးတစ်ယောက်ပြောဖူးတာသိပ်မှန်ပါတယ်။ ခေတ်ပျက်ရင်စီးပွားရှာရတာပိုလွယ်တယ်တဲ့။ သွေးထွက်အောင်မှန်တဲ့စကားမှန်း ကိုဗစ်ကာလမှသိလာရပါတယ်။
တရုတ်နဲ့ ရုရှားဟာ ကမ္ဘာ့ကာကွယ်ဆေး လုံခြုံစိတ်ချရမှု စံချိန်စံညွှန်းတွေကို ချိုးဖောက်ပြီး စျေးကွက်လက်ဦးမှုယူဖို့နဲ့ နိုင်ငံရေးမျက်နှာသာရဖို့ ကာကွယ်ဆေးကို စျေးကွက်ထဲပို့ဖို့လုပ်နေတဲ့အကြောင်းကို ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာမှာဖတ်ရပါတယ်။ ကျနော့်အာဘော်မဟုတ်ပါ။ ဝါရှင်တန်ပို့စ်ရဲ့အာဘော်ကို စဉ်းစားစရာတစ်ခုအဖြစ် မျှဝေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီသီးရှိအစိုးရတွေဟာ ကိုဗစ်တိုက်ပွဲမှာ မျက်ဖြူဆိုက်နေပါတယ်။ ပြည်သူတွေက ကာကွယ်ဆေးကိုရွှေထက်ပိုလိုချင်နေတယ်။ အစိုးရကို ကာကွယ်ဆေးအမြန်ဆုံးရဖို့ ဖိအားတွေပေးနေတယ်။ အစိုးရတွေဟာ ကာကွယ်ဆေးကို ပြည်သူတွေ လက်ထဲ စောစောချပေးနိုင်တာနဲ့ နိုင်ငံရေးမျက်နှာသာရမယ်။ အစိုးရတွေ မျက်ဖြူဆိုက်လေ ကာကွယ်ဆေးကိုင်ထားတဲ့ ဆရာကြိုက်လေပါပဲ။
တရုတ်နဲ့ရုရှားဟာ ကာကွယ်ဆေးကို အစိုးရတွေဆီချပေးပြီး သံတမန်ရေးလက်နက်အဖြစ် နိုင်ငံရေးမျက်နှာသာရဖို့ သုံးနေတာကို ပညာရှင်တွေက အတော်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ အမေရိကန်မှာ ထရမ့်ကလည်း ကာကွယ်ဆေးကိုရွေးကောက်ပွဲအမီဖြန့်ဝေဖို့လုပ်နေလို့ ပညာရှင်တွေက ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။ ခေတ်ပျက်တော့ သူဌေးဖြစ်ဖို့ နိုင်ငံရေးမျက်နှာရဖို့ ကာကွယ်ဆေးကိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေက ကြံစည်နေပါတယ်။ Vaccine Nationalism မလုပ်ကြဖို့ WHO က သတိပေးနေပါပြီ။
Oxfam ရဲ့ စစ်တမ်း report အရ ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေဟာ အခုထုတ်နေတဲ့ ကာကွယ်ဆေးပမာဏရဲ့ ၅၁ ရာနှုန်းကို ကြိုတင်ဝယ်ယူပြီးတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ၁၃ ရာနှုန်းပဲရှိပြီး ကာကွယ်ဆေးရဲ့ ၅၁ ရာနှုန်းကို ကြိုတင်ဝယ်ယူထားတာကို တရားပါရဲ့လားလို့ မေးခွန်းထုတ်နေတာပါ။ ကျန်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးပမာဏ ၂.၇၅၇ ဘီလီယံကို တရုတ်၊ ဘရာဇီး၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လိုနိုင်ငံတွေကဝယ်ယူထားပါတယ်တဲ့။
တရားကျစရာက တရုတ်နဲ့ ရုရှားတို့ဟာ သူတို့ကာကွယ်ဆေးကိုသာပြည်ပကိုတင်ပို့ဖို့လုပ်နေတာ အနောက်နိုင်ငံကကာကွယ်ဆေးတွေကိုကြတော့ ကြိုတင်ဝယ်ယူထားကြသဗျ။ သူတို့ကာကွယ်ဆေးတကယ်ကောင်းရင် အနောက်တိုင်းကဆေးတွေကို ဘာလို့ကြိုဝယ်နေသေးသလဲ မေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။ သူ့ပြည်တွင်းမှာလည်း ထိုးတော့ထိုးပေးပါရဲ့ ပြည်ပဆေးလည်းမှာတယ်။ မလောက်လို့မှာရင် ဘာလို့ပြည်ပကို အလုံးအရင်းနဲ့ပို့ဖို့ လုပ်နေလဲမေးစရာဖြစ်လာရော။ တရုတ်နဲ့ရုရှားကာကွယ်ဆေးတွေဟာ ထုတ်သာရောင်းဖို့တွန်းလုပ်နေတာ အခုထိ Phase3clinical trials စမ်းသပ်မှုတွေက မပြီးသေးပါဘူး။
စိတ်မချရတဲ့ကာကွယ်ဆေးကြောင့် လူသေစေနိုင်တဲ့အထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တသက်လုံး ခုတင်ပေါ်ကမဆင်းရပဲ အကြောသေသွားနိုင်ပါတယ်။ ၁၉၅၅ ခုနှစ်က Cutter Incident ကနေ လူတွေသေမှု၊ မသေတဲ့လူအချို့မှာ အကြောသေသွားမှု၊ ၁၉၅၅-၁၉၆၃ Simian virus 40 ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်မှု၊ ၁၉၇၆ Swine Flu Vaccine ကနေ အကြောသေရောဂါဖြစ်မှု။ အရင် post မှာ ကျနော်ရေးဖူးလို့အသေးစိတ်မရေးခဲ့တာပါ။
ယူအေအီးကဝန်ကြီးထိုးတယ်။ ဟုတ်ပြီ။ ကာကွယ်ဆေး error ဆိုတာလူတိုင်းလည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်ရင်လည်း သေတတ်တယ်။ ကိုဗစ်ကလည်းလူတိုင်းကူးတာမဟုတ်။ ကူးတဲ့လူတိုင်းလည်း ရောဂါမပြင်းထန်ဘူး။ သေတဲ့သူကျလည်းသေတယ်။ အဲ့နှစ်ခုချိန်ထိုးစဉ်းစားပေါ့။ မနေ့ကပဲ အမေရိကန် FDA ကကာကွယ်ဆေးစစ်ဆေးခွင့်ပြုမှုအဆင့်အတန်းကို သေချာကိုင်တွယ်ဖို့ စာထုတ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Phase3လည်းမပြီးသေးကမ္ဘာအဆင့်အတန်းမီလက်မှတ်မရသေးတဲ့ ကာကွယ်ဆေးကို ကိုယ့်သားသမီးကိုယ့်မိဘတွေကို ထိုးပေးကြမလား? ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ချိန်ပါ။ ဖြစ်သွားရင် အန္တရာယ်မကင်းရင် အကြောသေကနေ အသက်သေတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အန္တရာယ်ကင်းရင်တောင် အာနိသင်မထက်မြက်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကအာနိသင်ထက်မြက်တယ်ထင်ပြီး လူတောထဲသွားပြီးကူးလာရင် အန္တရာယ်ကြီးလွန်းလှပါတယ်။ ကိုယ်ထိုးတဲ့ကာကွယ်ဆေးက အတုအပမဟုတ်ကြောင်း သူများအာမခံတာထက် #ကိုယ့်အသက်နဲ့ကိုယ်အာမခံရမှာမို့ဆင်ခြင်ကြပါ။ အရင်ဦးအောင်ဝယ်ထိုးရင်း ကိုယ်အရင်ရောဂါရသွားနိုင်တာကို သတိပြုပါ။ သူတို့ထုတ်တဲ့ဆေးကိုယ့်ရောင်းပြီး သူတို့ကျ FDA အသိအမှတ်ပြု ကာကွယ်ဆေးကိုဝယ်နေတဲ့လူတွေကို သတိထားပါ။ မကြာခင်ကာကွယ်ဆေးလုပ်စားတွေပေါ်လာပါတော့မယ်။
အခုရတဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးမှ တကယ့်အသိအမှတ်ပြုကာကွယ်ဆေးပေါ်လာရင်ဘာလုပ်မလဲ? ထပ်ထိုးရင် ရှော့ဖြစ်ကုန်မလား? မနေ့ကတွေးမိတာလေးပါ။ ဒီအကြောင်းဒီနေ့ရေးပေးပါ့မယ်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ #ကာကွယ်ဆေးအမြန်ဆုံးရဖို့ကြိုးစားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အစိုးရအချင်းချင်း G2G ရဖို့ကြိုးစားရာမှာ ကာကွယ်ဆေးအရည်အသွေးဟာ အာမခံချက်ပိုရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာ နေ့စဉ်ရောဂါပိုးနဲ့ ထိတွေ့နေရတာမို့ အစိုးရနေနဲ့အမြန်ဆုံး G2G စီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ဟာ ရုရှားကကာကွယ်ဆေးထွက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဩဂတ်စ်လဆန်းကတည်းက WHO ရဲ့ Approval ကိုတောင်းခံခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အခုလို WHO ကနေ Approval ထောက်ခံချက်ယူတာဟာ ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ရပ်မို့ထောက်ခံပါတယ်။ ကျနော့်အတွက်ကတော့ FDA အသိအမှတ်ပြုကာကွယ်ဆေးကို စောင့်ပါမယ်။ ကာကွယ်ဆေးထက် Mask အရည်အသွေးကောင်းကောင်းနဲ့ မကူးအောင် ခပ်ခွာခွာနေဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ တကယ်တမ်းပြောရရင် Mask ဟာ သုံးတတ်ရင် ကာကွယ်ဆေးထက်ပိုစိတ်ချရကြောင်း ပညာရှင်တွေကထောက်ပြနေပါပြီ။
ကျနော့်အနေနဲ့ FDA က အသိအမှတ်ပြုတဲ့ဆေးရရင်တော့ ထိုးမှာပါ။ ကိုဗစ်အတွက် ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် #ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံပါ။ တရုတ်နဲ့ ရုရှားကကာကွယ်ဆေးတွေကိုလည်း အစွမ်းထက်ပြီးအန္တရာယ်ကင်းစေချင်ပါတယ်။ အခုထိတော့ ဘယ်ကာကွယ်ဆေးမှ FDA အသိအမှတ်ပြုမအောင်မြင်သေးပါကြောင်း။ ဒါ့ကြောင့်ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ထိုးရန်သာဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကတော့ ဖြစ်နေတဲ့ လက်ရှိသတင်းကို တတ်နိုင်သမျှ မျှဝေပေးပါ့မယ်။
← မြူးဇစ်ဇုန်ကေတီဗီ ပိုင်ရှင်ကို သိပြီဖြစ်သော်လည်း အမှုဖွင့်မည်သူ မရှိသေး၍ ကြန့်ကြာနေဟုဆို
ကေတီဗီနဲ့မာဆပ်တွေရှိတဲ့ ဟိုတယ်မန္တလေးမှာ လူနာ ၂၂ ဦးအထိရှိလာ၊ မြူးဇစ်ဇုန်လို ဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်နေကြ →